Orinasa fivoriambe elektronika - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Orinasa fivoriambe elektronika - PCBFuture
Teny lakile: orinasa fivoriambe PCB, fanamboarana PCB, Fivorian'ny birao boribory, Serivisy PCBA
PCBFuture dia natsangana tamin'ny taona 2009. Manokana manokana amin'ny famokarana PCB, fivoriambe PCB ary fizarana singa. PCBFuture dia nandalo ny rafitra kalitao ISO9001: 2016, ny rafitra kalitaon'ny CE EU, ny rafitra FCC.
Nandritra ny taona maro, nanangona fanandramana PCB, famokarana ary fanandramana fiasa PCB be dia be izy, ary miankina amin'ireo traikefa ireo, manome andrim-pianarana fikarohana siantifika lehibe sy mpanjifa orinasa lehibe sy salantsalany miaraka amina fanamboarana tokana, famafazana ary fanafoanana ny ny tabilao vita printy misy sosona avo lenta sy azo itokisana, manomboka amin'ny santionany ka hatrany amin'ny batch, ity karazana serivisy ity dia ampiasaina amin'ny indostria isan-karazany toy ny serasera, ny seranam-piaramanidina sy ny fiaramanidina, ny IT, ny fitsaboana, ny tontolo iainana, ny herinaratra ary ny fitaovana fitiliana.
Inona ireo orinasa fivoriambe elektronika?
Orinasa fivoriambe elektronika dia miasa amin'ny famokarana sy fitsapana ireo fivorian'ny birao vita pirinty, fivorian'ny tariby, fantsom-pifandraisana, fantsom-pifandraisana ary tabilao vita pirinty ampiasaina amin'ny vokatra elektronika amin'ny indostria maro karazana. Noho ny antony maro dia tena manararaotra ny famelana ny antoko fahatelo hanamboatra ireto singa ireto.
Tombony azo avy amin'ny orinasa fivoriambe elektronika?
Orinasa fivoriambe elektronika dia manome fahafaha-manao ho an'ireo orinasa kely kokoa misy famokarana voafetra ary manamaivana ny olan'ny olombelona. Inona koa, ny tanjon'ny famolavolana ny orinasam-pifandraisana elektronika dia ny manampahaizana manokana amin'ny toekarena maridrefy amin'ny ambaratonga, ao anatin'izany ny famokarana, ny fividianana akora, ary ny loharanom-pahalalana ao anatin'izany ny fahaizan'ny famoronana indostrialy. Izy ireo koa dia manome serivisy ampiana lanjany toy ny famolavolana injeniera, famakafakana famokarana, fitsapana miasa, serivisy famahana olana ary fampidirana subsystem. Manafaka ny mpanjifa izay tsy mila manamboatra sy mitazona firaketana lehibe ny vokatra izany. Vokatr'izany, ny mpanjifa dia afaka mamaly ny fitokonana tampoka amin'ny fangatahana haingana sy mahomby kokoa.
Maninona no mifidy ny serivisy fivoriambe elektronika:
Ny injeniera rehetra dia manana traikefa PCB mihoatra ny 5 taona.
Ny orinasa dia manana fitaovana famokarana mandroso isan-karazany.
Ny mpiasa dia manana famokarana betsaka, fanesorana ary fanaraha-maso.
Izahay dia manana izay ilaina amin'ny fanatanterahana ny filàn'ny tetik'asa manomboka amin'ny hevitra ka hatramin'ny famokarana ary ho mpiara-miombon'antoka injeniera elektronika feno na lehibe na kely ny tetikasanao.
Manokana amin'ny fampidirana vokatra vaovao izahay ary manakatra hatramin'ny famokarana volume, manohana ny tsingerin'ny famolavolana ny mpanjifa ary mampiroborobo ny fiaraha-miasa maharitra.
Afaka manome izahay:
1. PCB an'ny RoHS.
2. RF PCB Manamboatra
3. Laser microvias, vias jamba, vias nalevina
4. Fanandramana herinaratra amin'ny birao bare
5. PCB Impedance fitiliana
6. Fotoana fihodinana haingana
7. Teknolojia avo lenta
9. Pcb fanamboarana sy fivoriambe
Ny serivisy PCBFuture dia manambatra vahaolana feno manomboka amin'ny famolavolana layout, amin'ny programa famokarana sy lozisialy. Ireo serivisy dia tena hanampy anao hampitombo ny fifaninanana, amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny mpanjifa ara-potoana, ny fifehezana ny kalitao ary ny vidiny tsara, miaraka amin'ireo fotodrafitrasa famokarana atokana sy manokana any amin'ny firenena mifaninana amin'ny vidiny.